Warshad Load Loaders - Soosaarayaasha Gawaarida Loadleyda Shiinaha, Alaab-qeybiyeyaal
WIK20F Gawaarida gawaarida
Heerarka waxqabadka wiishka WIK20F Halbeegga Farsamaynta Qiyaasta cabbirka Kabtanka (hoose ee baaldiga dhulka ku yaal) mm 553530 Mashiinka Width (giraangirta ka baxsan) mm 188010 Balladhka baaldiga (mm) 19005 Mashiinka Dhererka (dusha sare ee cab) (mm) 179010 Wheelbase (mm) 245015 Wheel Xuddunta (mm) 14805 Ugu Yar ee Nadiifinta (mm) 2805 Rated loadkgrated Rated 2000 Awoodda baaldi Magac leh3 1.0 miisaanka guud ee miisaanka 550030 Xawaaraha mid kasta oo ka mid ah Km / h 1Forward, qalabka koowaad 90.5 2Forward, qalabka labaad 221 1Step b ...
Faa'iidooyinka Wax soosaarka WIK Waa la isku halleyn karaa oo waara: Qaabdhis culus oo culus, nidaamka wadista meeraha lagu kalsoonaan karo, muddada dayactirka dheer. Waxtarka sarreeya ee hawlgalka: awood xoog leh, kororka kororka, iswada dheellitirka otomaatiga ah, hawlgalka isku xirka, waxtarka sare ee forklift. Dhaqaalaha keydinta tamarta: mashiinka Weichai Steyr oo xawaare hooseeya, barokac ballaaran oo isku-dhaf ah bamka isku-xirnaanta, keydinta tamarta wax ku oolka ah. Hawlgal raaxo leh: cabir dusha sare leh, naqshad ergonomic ah, duuliye hawleed, kursi weyn. Nidaamka qaboojinta Advanced: heerkulka biyaha, oi ...
WIK867 Gawaarida gawaarida
WIK qeexitaannada Main iyo astaamaha WIK867 loader mainfeature 1Full khalkhalgelinta tijaabada korantada, dabacsanaan fudud, natiijooyin micro aad u fiican. Nidaamka shaqada ee isku-dhafka bamka laba-laabma, socodka is-weydaarsiga qulqulka qulqulka, saamaynta keydinta tamarta ayaa ah mid cajiib ah. 3dhiska baaldi otomaatig ah oo si toos ah u shaqeynaya, khalkhal gelin aad u sahlan, yareynaya xoogga shaqada ee darawalka. 4 Fududeynta baaldi otomaatig ah oo toos ah, isdaba marin ku habboon, yareynta xoogga shaqada ee darawalka. 5ZSingle ...
WIK866 Gawaarida gawaarida
WIK qeexitaannada Main iyo astaamaha WIK866 loader mainfeature 1Full khalkhalgelinta duullimaadka hawo-qaadashada, dabacsanaan fudud, natiijooyin micro aad u fiican. Nidaamka shaqada ee isku-dhafka bamka laba-laabma, socodka is-weydaarsiga qulqulka qulqulka, saamaynta keydinta tamarta ayaa ah mid cajiib ah. 3dhiska baaldi otomaatig ah oo si toos ah u shaqeynaya, khalkhal gelin aad u sahlan, yareynaya xoogga shaqada ee darawalka. 4 Fududeynta baaldi otomaatig ah oo toos ah, isdaba marin ku habboon, yareynta xoogga shaqada ee darawalka. 5ZSingle ...
WIK948 Gawaarida gawaarida
WIK qeexitaannada guud iyo jilayaasha WIK948 loader 1 Qaybta dhexe ee farshaxanka ah, gacan yar oo leexsan, moobiil iyo dabacsanaan, degganaansho xagga dambe ah, sahlanaanta hawlgalka ee goobta cidhiidhiga ah. 2 Cabiraadaha si fudud loo akhriyi karo ayaa muujinaya iyo koontarool si khaldan loo qaabeeyey oo wadista wadista ka dhigaysa mid ku habboon oo raaxo leh 3 Hawo ka badan bareegga qalabka korontada ku shaqeeya ee nidaamka 4 giraangiraha iyo bareega dhaca waxaa loo isticmaalaa nidaamka bareegga, kaas oo leh awood bareeg weyn oo ka dhigaysa bareeg xasilloon iyo nabadgelyo sare 4 Isteerinka Haydarooliga Full, wareejin awoodda tr ...
WIK938 Gawaarida gawaarida
WIK Qeexitaannada guud iyo jilayaasha WIK938 loader 1 Qaybta dhexe ee farshaxan, gacan yar oo leexsan, mobiil iyo dabacsanaan, degganaansho dhinaca ah, fudaydinta hawlgalka ee goobta cidhiidhiga ah. 2 Cabiraadaha si fudud loo akhriyi karo ayaa muujinaya iyo koontarool si khaldan loo qaabeeyey oo wadista wadista ka dhigaysa mid ku habboon oo raaxo leh 3 Hawo ka badan bareegga qalabka korontada ku shaqeeya ee nidaamka 4 giraangiraha iyo bareega dhaca waxaa loo isticmaalaa nidaamka bareegga, kaas oo leh awood bareeg weyn oo ka dhigaysa bareeg xasilloon iyo nabadgelyo sare 4 Isteerinka Haydarooliga Full, wareejin awoodda tr ...
WIK936 Gawaarida gawaarida
WIK Marka hore, faa'iidooyinka wax soo saarka Dalka II. Mashiinka qiiqa,, iswaafajinta iswaafajinta,, hagaajinta kala jarista,, isticmaalka shidaalka ilaa 5% Kordhi baaldiyo, kordhi wax soosaarka12% · 18Mpa nidaamka haydarka shaqeeya, hufnaan Dheeraad ah iyo, Awood xamuul Dhererka soo dejinta ayaa kordhay ilaa 3.1, taas oo u dhiganta Qaabka ZL50 Naqshadeynta nidaamka qaboojinta cusub, shuruudaha heerkulka ee -20 illaa 43degrees Celsius Mashiinka waxaa lagu dhejiyay dheeri ah, si loo sii wanaajiyo cab, r ...
WIK836 Gawaarida gawaarida
WIK Marka hore, faa iidooyinka badeecada Lagu kalsoonaan karo oo waara: nidaamka qashin qubka mashiinka go'an ee qaangaarka ah, qaabka guud wuxuu ahaa xaqiijin muddo dheer ah, nolosha qaybaha qaabdhismeedka ayaa si weyn loo kordhiyay. Waxtarka shaqada: Kicitaan xoog leh iyo kala jarid, hawlgal wax ku ool ah. Dhaqaalaha keydinta tamarta: tayadoo makiinadaha xawaaraha-hoose ku socda, nidaamka hawo-wareejinta ee leexashada ballaaran, waxtarka tamarta. Hawlgal raaxo leh: fududahay in la shaqeeyo, isteerinka fudud, buuq yar. Nidaamka qaboojinta ee horumarsan: isticmaalka qalabka biyaha lagu diro ...
WIK30F Gawaarida gawaarida
Heerarka farsamada ee WIK ee waxqabadka xamuulka ZLJ30F Waxqabadka lagu qiimeeyay culeyska 3000kg guud ahaan culeyska 9600kg awoodda baaldi 1.8m3 ugu badnaan xoog jiidista 97KN ugu badnaan xoog jabinta 127KN awoodda ugu sarreysa heerka 30 sareynta dhererka ugu badan 2900mm qulqulka ugu sarreeya 900mm cabirka guud (LWW) / 0920 nooca tareenka guud - * MAYA. of dhululubo-caajis * stroke 6 ...
WIK28F Gawaarida gawaarida
Qalabka WIK28F loader Engine 1, Mashiinka gawaarida isticmaalaya British Ricardo Technology, awood xoog leh, 2, Mashiinka wuxuu qaataa shaandhada saliidda, saameynta miiraha ayaa wanaagsan, oo ku habboon ka shaqeynta deegaanka leh cufnaanta boodhka sare; 3, Nidaamka qiiqa ayaa qaata nooca qarxa-caddeyntiisa, qiiqa ka yar, wasakhda oo yaraata, buuqa yar, saamaynta wanaagsan ee ilaalinta deegaanka, oo aad ugu habboon ka shaqeynta wadada ama dhuxusha dhuxusha laga helo; 4 Daboolka mishiinka wuxuu ka samaysan yahay bir bir adag leh, oo ah str ...